Ekuphileni kwethu kwansuku zonke sivamile awuboni the ingcebo kangangokuthi imvelo uye wasinikeza. Ikhono ukuhambisa - isipho esikhulu ngempela. Ngakho ngokwemvelo - uthole kusukela isihlalo bese uya kwelinye igumbi, aphumele ngaphandle, hamba uyokwenza i run otshanini ... Kubonakala sengathi imilenze ukukwenza ngaphandle iqhaza lethu. Kodwa kungazelelwe uma kwenzeka ukwahluleka umsebenzi kahle komzimba nemilenze senqabe ukuhamba, kulapha lapho siqaphela ukuthi umcebo possessed: ikghono.
Namuhla, sikhuluma hhayi mayelana isifo esiyingozi wemikhawulo aphansi, kodwa ngalokho maningi amathuba uphawu abanye babo. Kumayelana umlenze amajaqamba neminwe.
Pretty engeyona ingozi kubukeka ezizwa engaphilile - umlenze amajaqamba. Kuvamise yesikhathi esifushane neyezinto akusho ibakhathaze kakhulu. Abaningi kithi baye ihlangabezane simanga okungenani kanye: kungenzeka Phakathi nohambo, noma ngisho ngesikhathi sokulala. Ngakho-ke, ngokuvamile esingasoze ngisho ukuthi uma ushayela izinzwane zakho, akusiyo ngempela elula mkhuba bathi akunangozi neze.
Yingakho kunjalo? I ezivame kakhulu ezimbili. Okokuqala, i-hypothermia kungadala Ukudlikizela, phakathi kwesikhathi lapho constrict emithanjeni yegazi nasemasosheni kwegazi kuyaphazamiseka. nezicathulo Okwesibili, noma ungakhululekile okungafanele ukuthi unikina noma bazokwenza lokho nakuBafana emlenzeni wakhe. Kuyinto yezizathu ezisobala futhi kuyaqondakala.
Kodwa kufanele uyinake empilweni yabo, uma ubona ngokuvamile inkwantshu nasezinzwanini. Uma yalezi zizathu ezimbili musa ukuchaza ebuthakathakeni bakho, kufanele babheke ngenxa yezizathu ezingathi sína nakakhulu ngalesi simo umzimba. Futhi kuyindaba kwezokwelapha nezingqalabutho kufanele afune usizo lwezokwelapha. Kulesi simo, inkwantshu kuwuphawu usesimweni esibucayi kakhulu ukuthi kufanele kuthathwe. Umbuzo - kungani ukushayela izinzwane zakho? - kuholela ukwambulwa izinkinga esavela impilo yakho.
Ngakho, liyini isizathu? Eyokuqala - ukuphazamiseka umzimba, ukulandelela izakhi okudingwa ngumzimba. Okwesibili - zokugula wamathambo. Okwesithathu - isifo imithambo yegazi. Okwesine - ekusebenziseni okungalungile. Okwesihlanu - bikho ekudleni izinto ezidingekayo - yensimbi, i-calcium, magnesium kanye potassium. Futhi, ngesizathu kungaba ukubhema, ikhofi ngokweqile.
Kukhona izifo eziningi zingahlanganiswa esitho ngezwi. Lokhu abanale nkinga, isifo sikashukela, izifo zezinzwa emithambo yegazi, izinqubo ezihlukahlukene ukuvuvukala, ekugcineni, ukuthi unesimila ebuchosheni.
Ngemva ekutholeni yini eyabangela inkwantshu izinzwane zakho esimweni sakho, udokotela ngeke linqume Inkambo yokwelashwa okumele ibanjwe ngokuhambisana esiqinile imithetho.
Yehlisa lezinzwani? Inkinga ziyoxazululwa lapho isizathu esiyinhloko lesi simanga ezingemnandi siqedwa.
Kufanele kuqashelwe ukuthi isimo, sikhuluma, akusiyo njalo uphawu lesi sifo. Kuyinto evamile ngempela ngesikhathi sokukhulelwa. Phela, lo mama esizayo sika imilenze umthwalo inyuka kakhulu. Ngokuvamile uma ubhekene nesimo esinjena-ke kuletha izinzwane nje ebusuku.
Sinzima umlenze amajaqamba zenzeka lokuqala nasekugcwalisekeni trimesters sokukhulelwa wesibili nowesithathu. Ngo kwayo lokhu kungenxa ubuthi kanye nokuntuleka concomitant izakhi trace (i-sodium, i-potassium, i-calcium, magnesium) e umzimba. In the isinyathelo sokugcina bephethe ingane umlenze amajaqamba kubangelwa izinkinga outflow wegazi emithambo yegazi (kwesibeletho esindayo babancwebe imithambo yegazi we ukhalo futhi kuphazamisa ukuhamba evamile igazi).
Esimweni ngasinye nasemilenzeni amajaqamba kufanele aphathwe ngokuvumelana imbangela siyachazwa. Kodwa zinike (noma kothandekayo) usizo lokuqala usesimweni esinjalo kungaba indlela elula. Kufanele azame ukudonsa imisipha ukuthi inkwantshu, welule futhi uphumule. Simple ukunyakaza izinzwane futhi alethe impumuzo. It Kunconywa unyawo massage ukuthuthukisa kwegazi kwemisipha. Ngezinye izikhathi kuyasiza ngendlela elula kanjani kwabathinta inaliti emlenzeni imisipha enyinyekile okuncane.
Nokho, ukufinyelela ku udokotela uma amajaqamba ziyabuya, kubalulekile.
Izifo lapho ithambo ukuvuvukala kwenzeka
Sakhetha ubukhulu bendwangu yembhedeni kabili